चुम्बकीय विलम्बन - साँचो संस्करण चुम्बकीय उत्तर
म चुरोट उत्तर र किन किन उत्तर उत्तर भिन्न हुन्छ
चुम्बकीय रूपान्तरण, जसलाई चुम्बकीय भिन्नता भनिन्छ, पृथ्वीमा एक बिंदुमा कम्पास उत्तर र उत्तर उत्तर बीचको कोणको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। कम्पास उत्तर एक कम्पास सुई को उत्तर अन्त मा देखाईएको दिशा हो जबकि वास्तविक उत्तर भौगोलिक उत्तर ध्रुव तिर हेर्दै पृथ्वीको सतहमा वास्तविक दिशा हो। चुम्बकीय गिरावट परिवर्तन विश्वको एक स्थानमा आधारित छ र परिणामस्वरूप यो सर्भरहरू जस्तै नक्सामा निर्माताहरू, नेभिगेटरहरू र कुनै पनि कम्पासको प्रयोग गर्नका लागि तिनीहरूको दिशा पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ।
चुम्बकीय गिरावटको लागि समायोजन बिना सर्भरहरूले गरेको काम गलत बन्द गर्न सक्छ र ब्यक्तिहरु जस्तै कम्पास प्रयोग गरेर मान्छे सजिलै गुमाउन सक्छ।
चुम्बकीय गिरावटका अनिवार्य बारेमा सिक्न अघि यो पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको बारेमा जान्न महत्त्वपूर्ण छ। पृथ्वी एक चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा घिमिरे छ जुन समय र स्थानमा परिवर्तन गर्दछ। राष्ट्रिय भौगोलिक डेटा केन्द्र अनुसार यो क्षेत्रमा चुम्बकीय क्षेत्र जस्तै डुबुल चुम्बक (जसलाई उत्तर र दक्षिण पोलसँग सिधा छ) उत्पन्न गरिएको छ जुन पृथ्वीको केन्द्रमा रहेको छ। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको स्थितिमा डुबोलको अक्ष पृथ्वीको घुमाईबाट 11 डिग्री भन्दा बढी देखि अफसेट हुन्छ।
किनभने पृथ्वीको चुम्बकीय अक्ष भौगोलिक उत्तर र दक्षिण पोल अफसेट छ र चुम्बकीय उत्तर र दक्षिण पोलहरू समान छैनन् र यी दुवैको बीचमा चुम्बकीय गिरावट छ।
चुम्बकीय विघटन संसार भर
पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र धेरै अनियमित छ र यो स्थान र समय संग परिवर्तन गर्दछ। यो अनियमितताको कारण पृथ्वीको इन्टर भित्र भित्रको विविधता र आंदोलनको कारणले लामो समय सम्म हुन्छ। पृथ्वी विभिन्न प्रकारको चट्टान र पतला चट्टानमा बनाइएको छ जुन विभिन्न चुम्बकीय गुणहरू छन् र तिनीहरू पृथ्वीमा वरिपरि घुमाउँछन्, त्यसैले पनि चुम्बकीय क्षेत्र गर्दछ।
विस्कॉन्सिन स्टेट कार्टोग्राफरको कार्यालयको अनुसार, पृथ्वी भित्रको भिन्नता "चुम्बकीय उत्तरको चुम्बन र चुम्बकीय मेरिडियनको ओलम्पिकको कारण हो।" चुम्बकीय गिरावटको सामान्य परिवर्तन वार्षिक परिवर्तन भनिन्छ र लामो अवधिमा भविष्यवाणी गर्न निकै गाह्रो छ।
भेट्टाउन र चुम्बकीय विच्छेदन गणना
चुम्बकीय गिरावटमा परिवर्तनहरूको भविष्यवाणी गर्ने एकमात्र तरिका धेरै स्थानहरूमा विभिन्न माप लिन सकिन्छ। यो सामान्यतया उपग्रह मार्फत गरिन्छ र सन्दर्भको लागि नक्शाहरू बनाइन्छ। चुम्बकीय गिरावटको प्रायः नक्साहरू ( उत्तरी अमेरिकी चुम्बकीय विच्छेदन नक्सा र विश्वव्यापी नक्सा (पीडीएफ)) अलग-अलग (रेखाहरू बराबर मूल्यको अंकहरू प्रतिनिधित्व गर्ने लाइनहरू) सँग बनाइन्छ र तिनीहरूसँग एक रेखा छ जसमा चुम्बकीय गिरावट शून्य छ। एक शून्य रेखाबाट टाढाको रूपमा त्यहाँ नकारात्मक गिरावट र सकारात्मक गिरावट देखाउने रेखाहरू छन्। नक्शाको साथ कम्पास धारण गर्न सकारात्मक गिरावट थपिएको छ, जबकि नकारात्मक गिरावट घटाइन्छ। अधिकांश ट्रापोग्राफिक नक्शाहरूले उनीहरूको किंवदंतीमा देखाउँछन् (म्याग्रेसन प्रकाशित भएको समयमा) को लागी चुम्बकीय गिरावट पनि गर्दछ।
चुम्बकीय गिरावट फेला पार्न नक्शा प्रयोग गर्नुको साथै, NOAA को नेशनल ज्याफोसिकल डाटा सेन्टरले एक वेबसाइट चलाउँछ जसले प्रयोगकर्ताहरूले अक्षांश र विशिष्ट मितिमा देशान्तरको माध्यमबाट क्षेत्रको गिरावटको अनुमानको गणना गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणको लागि, स्यान फ्रान्सिस्को, क्यालिफोर्निया, जुन 37.775 एम्बुलेन्सको अक्षांश छ र 122.4183 एम्स्टर्डमको देशान्तर रहेको छ, त्यहाँ 27.9 2013 मा 13.96 मेसेम्बर डब्ल्यूको अनुमानित चुम्बकीय गिरावट थियो।
NOAA को कैलकुलेटर पनि अनुमान गर्दछ कि यो मूल्य लगभग 0.1 कमांड डिग्री डब्ल्यू प्रति वर्ष द्वारा बदलिएको छ।
चुम्बकीय गिरावट बताउदा यो गणना गणनामा सकारात्मक वा नकारात्मक हो भनेर ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ। एक सकारात्मक गिरावटले कोण देखाउँछ जुन साँचो उत्तरबाट घडीको दिशा हो र नकारात्मक घडीको दिशामा हो।
चुम्बकीय विच्छेद र कम्पास प्रयोग गरी
नेभिगेशनका लागि प्रयोग गर्न एक सजिलो र प्रायः सस्तो उपकरण कम्पास हो । कम्पासले एक सानो चुम्बकीय सुई राखेको छ जुन पिभोटमा राखिएको छ ताकि यसले घुमाउन सक्छ। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र सुईमा एक बल राख्छ, यसले यो सार्न सक्छ। कम्पास सुई घुमाउनेछ जब सम्म यो पृथ्वी को चुम्बकीय क्षेत्र संग संरेख गर्दछ। केहि क्षेत्रहरूमा यो संरेखण सही उत्तरको रूपमा हो, तर अरू चुम्बकीय गिरावटमा पङ्क्तिबद्धता हुन नसक्ने कारणले गर्दा गुमाउनु हुँदैन र कम्पास समायोजन गर्नुपर्छ।
नक्साको साथ चुम्बकीय गिरावटको समायोजन गर्नको लागि कसैले पनि आफ्नो स्थानको साथमा आलोचक भेट्टाउन वा घटाउको विवरणको लागि नक्साको किंवदंतीलाई हेर्नु पर्दछ।
कुनै पनि एनएएएए नेशनल जियोफेसिकल डेटा सेन्टरबाट चुम्बकीय कमीकरण क्यालकुलेटरहरू यो मूल्य पनि प्रदान गर्न सक्छ। त्यसपछि नक्साको साथ कम्पास धारण गर्न सकारात्मक गिरावट थपिएको छ, जबकि नकारात्मक गिरावट घटाइन्छ।
चुम्बकीय गिरावटको बारे बढि जान्न, नेशनल ज्यायोफेसिकल डेटा सेन्टर चुम्बकीय विच्छेदन वेबसाइटमा जानुहोस्।
सबै पचास राजमार्गको नाम?
क्षेत्रद्वारा क्यारिबियन देशहरू
गणित शब्द शब्दावली
Sandlot - बेसबल मा एक सामाजिक कौशल पाठ
कलेज डिग्री बिना राष्ट्रपति
शरीरका भागहरू सन्दर्भ गर्दै
क्रय र एक ध्रुव Chainsaw प्रुनर प्रयोग गर्दै
विशेषताहरू, प्रकार्यहरू, र शब्दकोशहरूको सीमितताहरू
द्वितीय विश्व युद्ध: संचालन लिला र फ्रांसीसी बेड़े को स्कटलिङ
जडानको पावर: परिभाषा र उदाहरण
"परमेश्वरको राजा" के हो?
पश्चिमी क्यारोलिना विश्वविद्यालय जीपीए, एसएट र एक्ट डेटा
संचार प्रक्रिया को आधारभूत तत्व
शीर्ष हास्य पुस्तक क्यारेक्टरहरू
दक्षिण अमेरिका प्रिन्सेबल
शीर्ष फ्लोरिडा कलेजहरू
मारियाह केरीको 18 नम्बर-एक हिट्स
साँचो मक्खन, आदेश Diptera
कोलम्बिया विश्वविद्यालय फोटो टूर
वृश्चिक र Aquarius प्यार संगतता
कलिला चिन्ह लगाउँदै: मुस्लिम प्रार्थनाको लागि मक्का (मक्का) राख्नु
इटालीको बारेमा शीर्ष फिल्महरू
Mabon को लागि खाद्य अलर्ट सिर्जना गर्नुहोस्
लोन जोडी परिभाषा